Saxaafadda Ingiriiska oo soo saartay Mataanka Mo Farah oo Hargeysa jooga. – PUNTLANDER Gabaygii Khaliif Shiikh Maxamuud
WararkaC/rixman Xoosh Jabriil oo Kismaayo u hanjabay dha...
- C/rixman Xoosh Jabriil oo Kismaayo u hanjabay dhagayso Xildhibaano ka soo jeeda beelah Daarood oo Baqdin ku jooga Muqdisho Puntland oo dil ku xukuntay 7qof oo ka danbeeyay dilka sheekh Cabduqaadir akhriso Daawo:Muqdisho oo ay ka socdaan Mudaharaadyo lagu tageerayo SHIR HEER GOBOL AH OO SAXFIYIIN SOOMALI KU JIRTO UGA SOCDA DALKA ETHOBIA SAWIRO HOME
Published On: Sun, Aug 19th, 2012 Wararka | By Admin Saxaafadda Ingiriiska oo soo saartay Mataanka Mo Farah oo Hargeysa jooga.
Tags Wargeyska Mail ee Ingiriiska kasoo baxa ayaa baaritaan wariye u diray Soomaalia waxaa ay kusoo barteen oo shaacbaxiyeen qoyska Orodyahanka Mo Farax oo asigo kasoo jeedaa halkaasi iyadoo ay soo sawirteen wareysina ka qaadeen Xasan Farah oo mataan la ah Mo , aadna isku shabaha wajiyadooda.
Mataanka Mo Farah Hassan oo lasoo sawiray isagoo sameeynaya astaanta uu caanka ku yahay walaalkii xilli uu joogay guriga uu ka degan yahay magaalada Hargaysa.
Mo Farah iyo labo isaga ka wayn ayaa Ingiriiska yimid si ay ula noolaadaan aabohood halka kuwii kale iyo Xasan looga soo tegey Soomaaliya
.Xasan wuxuu ku barbaaray bus iyo busaarad iyo xaalad faqri ah isagoo ku sugnaa dalka ay Soomaaliya deriska yihiin ee Jabuuti isagoo lkn si aan xumaani ku jirin ula soconayay xaalladda walaalkii oo nin muuqda ka noqday garoomada lagu baratamo ee dalka Ingiriiska.
Mo ayaan ka hadlin xaallada nololeed ee qoyskiisa ku sugan Africa. Lkn wargayska The Mail on Sunday ayaa Xasan ugu tegey gurigiisa ku yaalla Hargaysa, Woqooyiga Soomaaliya todobaadkii tegey.
Waxayna ahayd halkaas meel malaha aduunka barkii ka fog halka uu ku yaallo garoonka Olympic Stadium ee magaalada London ee carro Ingiriis oo uu walaalkii isagoo hal-wayn hillinada (kanaallada) caalamiga ah ka daawanayay walaalkii oo labaaleey taariikhi ka sameeyey dalka Britain oo uu laba biladood oo dahab ah usoo hooyay.
Saqdii dhexe ayay dadka wanaagooda jeceli waxay soo garaacayeen albaabka guriga Xasan oo ah nin magaalada oo dhan laga wada yaqaanno.
Shalay, ayaanu u tagnay ayay leedahay gabadha warkan qortay isagoo weli ku dabaal degaya funaanadda xulka Britain ee Team GB, balse Xasan wuxuu bilaabay inuu ka sheekeeyo qisada xanuunka badan ee kala gaysay isaga iyo walaalkii.
”Waxaan iskaga mid ahayn wax kasta, dad kala go’i kara maynaan ahayn” ayuu yiri. ”Waxaanu cunada ku wadaagi jirney hal saxan, sariir baanu isla seexan jirney, waanu isla ciyaari jirney oo wax isla baran jirney, waayo waxaa jirta in jacaylka mataanuhu uu ka qoto dheeryahay jacaylka walaalaha kale” ayuu sheekadiisa ku bilaabay Xasan.
”Markii uu Mo iga tegey qalbigayga meel baa ka dalooshantay. Weli meeshii lama daboolin lkn waxaan ogahay inuu meel uun qalbigayga kaga yaallo anna kiisa”
”Sida qoysas badan oo Soomaali ah waxaa nakala riday dagaal. Teeydu way kasii qaraartahay kuwa dad badan. Waayo waxaan ku waayay qaybta kale ee nafteeyda oo ah mataankayga”.
Maalmahan waanu isu dhownahay weli, waloow ay jiraan dhibaatooyinka safar iyo kuwa isgaarsiineed ee dalkan” ayuu yiri Xasan.
Xasan ayaa rumaysan inuusan weligii magdhabi karin sanadaha ay kala maqnaayeen, lkn wuxuu sheegay in markii uu walaalkii ku guulaystay orodka 10,000 ee mitir inuu walaalkii ahaa qofkii ugu horeeyey ee uu wacay.
Wuxuu igu yiri buu yiri: ”Walaalkay iisoo ducee. Waxaan rajo wayn ka leeyahay inaan bilad 2-aad oo dahab ah ku guulaystee. Waayo waa wixii aan sugaayay weligeey”
Aqalkii uu deganaa Mo Farah oo ku yaala Deryanka , haatan ay degantahin qoyskiisa About the Author
Puntland oo dil ku xukuntay 7qof oo ka danbeeyay dilka sheekh Cabduqaadir akhriso